Imiphi imithombo engangisiza engcono kakhulu nge-DoF emva kwe-backlink?
Ukufuna amawebhusayithi noma amabhulogi okungaba ngcono kakhulu kuDoF ngokulandela emuva, ungase ucabange ngokuphawula kwebhulogi, ukuthunyelwa kwabavakashi, ukufakwa kwesiqondisi kanye nokufakwa kuhlu lwebhizinisi, njalonjalo. Yiqiniso, ungathola izixazululo ezinhle kakhulu zokuxhumanisa okusezingeni eliphezulu lapho. Kodwa iphuzu liwukuthi, ingabe zikhona izixazululo eziqhamukayo ezizobe zingcono kunazo zonke zeDoF ngemuva kwe-backlink ikakhulukazi? Nginezici ezithile zezindawo.
Kodwa ngaphambi kokubuyekeza ngamunye wabo, ake siqale ngesikhashana. Ngempela, kungani kufanele ube nabo kuwebhusayithi yakho noma ibhulogi? Ukwenza konke okusemandleni akho ukuthola i-DoF emva kwe-backlinks, yiziphi izinhlobo zezinzuzo esingalindela ngokufanele kuzo?
Izinzuzo ezihamba phambili ze-DoFandela emuva kwamalinkini
ukwandisa usesho lwe-Traffic oluqhutshwa ngqo kumakhasi akho noma kumabhulogi wakho;
Isiphathimandla Esiphezulu Samandla enikeza amandla okuqhubekayo emsebenzini wakho;
ukwandisa iPCS yakho ye-AdSense (izindleko ngokuchofoza ngakunye);
ukuthuthukisa inqubekelaphambili yakho eqhubekayo nge-Google PageRank;
ngcono i-Search Engine Rankings yakho yamanje futhi uvumele ukuthuthukiswa kwakho okuqhubekayo.
Kunamaphesenti angu-12 ezindawo ezivelele ezilindeleke ukuba zivumelane nawe kangcono ku-DoF emva kwe-backlinks. Phakathi kwabanye, ngingathanda ukuchaza izinsiza ezilandelayo ku-intanethi njengokungathi izindawo ezifanele zokuba nokuqala kokuqala ukukwakha izixhumanisi ne-DoFollow imfanelo. Ngezansi ngizoqala nge-Google Plus, i-YouTube, i-LinkedIn, ukuphela nge-Blogger dot com. Ngakho-ke, ake siye phansi kule ndaba!
Ukuba omunye wamawebhusayithi athandwa kakhulu kwi-Social Media, i-Google Plus kufanele futhi yaziwa njengesikhulumi esikhulu senhlalo sokuqhuba ukukhuthazwa okuphumelelayo for iwebhusayithi yakho noma ibhulogi. Ngikholelwa noma cha, kodwa ngezizathu ezithile, le nsizakalo ejwayelekile ye-giant search giant ngokuvamile ibonakala inganqunywa ngabaningi be-webmasters nabanamakhasimende. Noma kunjalo, ngincoma ukuthi uzame i-akhawunti yakho siqu ngaphandle - ukuze ujabulele i-DoF elandelayo ye-backlink enegunya eliphezulu ngesikhathi semaminithi.
Lokhu kubamba amavidiyo okuthandwa kakhulu kungasetshenziswa ukuthola amanye ama-backlink engeziwe - ukudala isiteshi sakho kuphela nokugcwalisa "isigaba". Ngokwenza ngale ndlela, noma kunjalo, ungaba NoNo kuphela kuphela olandela emuva. Ukuze uthole i-backlink eyigugu kakhulu neDoFollow, kuzomele uhlole izilungiselelo zesiteshi eziphambili. Ngaleyo ndlela, chofoza "iwebhusayithi ehambisanayo" bese ubeka i-URL yakho kuwebhusayithi nje. Qaphela, ukwenza inkohliso isebenze kahle, kuzodingeka udlule inqubo yokuqinisekisa ku-Google Webmaster Tools yakho kuqala.
Akuyona nje indawo enhle yokwenza inethiwekhi ebanzi yobudlelwano nobuchwepheshe, kepha ithuba elihle kakhulu lokuba ne-backlink ephezulu yamandla - futhi angaboniswa abasebenzisi abanentshisekelo abavela emhlabeni wonke. Futhi awufuni ukuyilahlekelwa, akunjalo? Ukwakha enye i-backlink nge-DoFollow imfanelo ku-LinkedIn - vala iphrofayela yakho siqu, sebenzisa imizuzu emibili ukugcwalisa izigaba ezidingekayo, futhi wabelane ngesixhumanisi esibonelweni sakho seposi, ukubuyekezwa komkhiqizo, njll.Ngaleyo ndlela, mhlawumbe noma yikuphi ukuxhumana owabelana ngakho kuzoba okubalulekile. Okumangalisayo, eh?
Le platform yokubhuloga ayikho edumile, kepha ngifakazela ukuba uyihlole ngaphansi kwanoma yiziphi izimo. Nansi indlela ongathola ngayo i-backlink ne-DoF elandela ngaphandle - vele uqalise ibhulogi yakho entsha yokusekela ku-dot ye-Blogger, bese ukhokha isikhathi sokuyigcwalisa ngokuqukethwe komsindo Source . Xhumanisa iwebhusayithi yakho yebhizinisi eliyinhloko noma ibhulogi - futhi usuqedile!